အမ်ိဳးသားတို႕၏ လိင္အဂၤါကို ထိခိုုက္ေစေသာ အခ်က္မ်ား – Gentleman Magazine
အမျိုးသားတို့၏ လိင်အင်္ဂါကို ထိခိုက်စေသော အချက်များ
အေရးမၾကီးတဲ့ အခ်က္အေသးအမႊားေလးေတြက ကိစၥအၾကီးၾကီးေတြရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။အဲ့ဒီေတာ့ ကိစၥေသးေသးေလးေတြကို သတိထားျပီး ျပဳလုပ္ျခင္းက လုပ္ငန္းအၾကီးစားေတြရဲ႕ ေအာင္ျမင္ျခင္းအေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္လာပါတယ္။
အဲ့ဒီလိုပါပဲ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးရဲ႕ အေရးအၾကီးဆံုး။အမ်ိဳးသားဘဝရဲ႕ သက္ေသတစ္ခုျဖစ္တဲ့ လိင္တံကို ထိခိုက္ေစမယ့္ ကိစၥအေသးအမႊားေလးေတြကို က်ြန္ေတာ္တို႕သတိမမူမိက်ပါဘူး။အဲ့ဒီ့အခ်က္အေသးအမႊားေလးေတြကို သတိမမူမိရင္ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥကို အၾကီးအက်ယ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစနိုင္ပါတယ္။အဲ့ဒီေတာ့ အဲ့အက်င့္ေလးေတြကို သတိထားျပီးျပဳျပင္သင့္ပါတယ္။
Sheffieldတကၠသိုလ္ရဲ႕ ၂၀၁၄တုန္းက အမ်ိဳးသား၁၉၇၀ရဲ႕သုတ္ရည္ေတြကိုေလ့လာခ်က္တစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။၄ရာခိုင္ႏႈန္းထက္နည္းေသာ ေဆးလိပ္ေဆးရြက္ၾကီးသံုးစြဲသူအမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ သုတ္ရည္ကသာ မ်ိဳးေအာင္နိုင္စြမ္းရွိျပီး က်န္၉၆ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ေဆးလိပ္ေသာက္သူေတြမွာ အဲ့ဒီအရည္အခ်င္းေလ်ာ့နည္းလြန္းေနပါတယ္။
အေမရိကန္ေဆးပညာဂ်ာနယ္ရဲ႕ ၂၀၀၈ခုႏွစ္တုန္းက ေလ့လာမႈတစ္ခုမွာ
ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဖက္နဲ႕ လိင္ဆက္ဆံတဲ့အၾကိမ္ေရမ်ားတဲ့သူေတြဟာ မဆက္ဆံတဲ့သူေတြထက္ ပန္းေသပန္းညွိဳးျဖစ္နိုင္စြမ္းနည္းပါတယ္။လူအေယာက္၁၀၀၀ကို စမ္းသပ္ၾကည့္ခဲ့တဲ့ရလဒ္အရ တစ္ပတ္ကို သံုးၾကိမ္ေလာက္ ဆက္ဆံေလ့ရွိတဲ့သူေတြထဲမွာ ၁၆ေယာက္သာလွ်င္ ပန္းေသပန္းညွိဳးျဖစ္နိုင္စြမ္းရွိတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
မစ္ခ်ီဂန္တကၠသိုလ္ရဲ႕ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ အိပ္ေရးမဝတဲ့သူေတြဟာ ေနာက္ေန႕ေတြမွာ လိင္စိတ္နည္းျပီး မ်ိဳးေအာင္နိုင္စြမ္းေလ်ာ့က်သြားတတ္ပါတယ္။အာရံုစူးစိုက္နိုင္စြမ္းက်ဆင္းျခင္း ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္းနဲ႕ အရိုးနဲ႕ၾကြက္သားေတြ ေပ်ာ့တြဲလာနိုင္စြမ္းပိုမ်ားျခင္းတို႕ကိုပါ ၾကံဳေတြ႕နိုင္တယ္လို႕ The Daily Mailသတင္းစာမွတစ္ဆင့္ တင္ျပထားပါတယ္။ ခ်ီကာဂိုတကၠသိုလ္ရဲ႕ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ တစ္ညကို ၅နာရီထက္ အိပ္ခ်ိန္နည္းတဲ့သူေတြဟာ တစ္ညကို ၇နာရီကေန ၉နာရီအထိ အိပ္ခ်ိန္ရွိသူေတြထက္ အမ်ိဳးသားေဟာ္မုန္းျဖစ္တဲ့ Testosteronပိုနည္းေလ့ရွိျပီး ၁၅ႏွစ္စာေလာက္ေစာျပီး အိုမင္းဟန္ေပါက္လာပါတယ္။အဲ့ေတာ့ အမ်ိဳးသားထုေရ ညမနက္ခင္အိပ္ရာေစာေစာဝင္သင့္တယ္လို႔မ်ား မစဥ္းစားမိဘူးလားခင္ဗ်ာ???
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္မွ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္တစ္ခုအရ အလြယ္စာအစားမ်ားတဲ့သူေတြဟာ အစားနည္းတဲ့သူေတြထက္ မ်ိဳးေအာင္နိုင္စြမ္းပိုနည္းေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
အရေးမကြီးတဲ့ အချက်အသေးအမွှားလေးတွေက ကိစ္စအကြီးကြီးတွေရဲ့ အကြောင်းရင်းဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ ကိစ္စသေးသေးလေးတွေကို သတိထားပြီး ပြုလုပ်ခြင်းက လုပ်ငန်းအကြီးစားတွေရဲ့ အောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုပါပဲ အမျိုးသားတစ်ဦးရဲ့ အရေးအကြီးဆုံး။အမျိုးသားဘဝရဲ့ သက်သေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ လိင်တံကို ထိခိုက်စေမယ့် ကိစ္စအသေးအမွှားလေးတွေကို ကျွန်တော်တို့သတိမမူမိကျပါဘူး။အဲ့ဒီ့အချက်အသေးအမွှားလေးတွေကို သတိမမူမိရင် အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စကို အကြီးအကျယ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ အဲ့အကျင့်လေးတွေကို သတိထားပြီးပြုပြင်သင့်ပါတယ်။
Cedars-Sinaiဆေးဝါးသုတေသနဌာနရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အမျိုးသားတွေက ပန်းသေပန်းညှိုးရောဂါအဖြစ်နည်းပြီး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေ ပိုမိုမြင့်မားပါတယ်။အမျိုးသားအယောက်၃၀ဝကို လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့သူနဲ့ မလုပ်တဲ့သူတွေကို အုပ်စုခွဲပြီး ရလဒ်ကို စာရင်းကောက်ယူပါတယ်။လမ်းလျှောက်ခြင်း ခပ်နှေးနှေးပြေးခြင်းတို့လို ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့သူတွေက မလုပ်တဲ့သူတွေထက် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည် မြင့်မားကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။
Sheffieldတက္ကသိုလ်ရဲ့ ၂၀၁၄တုန်းက အမျိုးသား၁၉၇ဝရဲ့သုတ်ရည်တွေကိုလေ့လာချက်တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။၄ရာခိုင်နှုန်းထက်နည်းသော ဆေးလိပ်ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲသူအမျိုးသားတွေရဲ့ သုတ်ရည်ကသာ မျိုးအောင်နိုင်စွမ်းရှိပြီး ကျန်၉၆ရာခိုင်နှုန်းသော ဆေးလိပ်သောက်သူတွေမှာ အဲ့ဒီအရည်အချင်းလျော့နည်းလွန်းနေပါတယ်။
၃။ လူပျိုဘဝ မကုန်ဆုံးသေးခြင်း
အမေရိကန်ဆေးပညာဂျာနယ်ရဲ့ ၂၀၀၈ခုနှစ်တုန်းက လေ့လာမှုတစ်ခုမှာ
ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံတဲ့အကြိမ်ရေများတဲ့သူတွေဟာ မဆက်ဆံတဲ့သူတွေထက် ပန်းသေပန်းညှိုးဖြစ်နိုင်စွမ်းနည်းပါတယ်။လူအယောက်၁၀၀ဝကို စမ်းသပ်ကြည့်ခဲ့တဲ့ရလဒ်အရ တစ်ပတ်ကို သုံးကြိမ်လောက် ဆက်ဆံလေ့ရှိတဲ့သူတွေထဲမှာ ၁၆ယောက်သာလျှင် ပန်းသေပန်းညှိုးဖြစ်နိုင်စွမ်းရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။
မစ်ချီဂန်တက္ကသိုလ်ရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ အိပ်ရေးမဝတဲ့သူတွေဟာ နောက်နေ့တွေမှာ လိင်စိတ်နည်းပြီး မျိုးအောင်နိုင်စွမ်းလျော့ကျသွားတတ်ပါတယ်။အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းကျဆင်းခြင်း ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနဲ့ အရိုးနဲ့ကြွက်သားတွေ ပျော့တွဲလာနိုင်စွမ်းပိုများခြင်းတို့ကိုပါ ကြုံတွေ့နိုင်တယ်လို့ The Daily Mailသတင်းစာမှတစ်ဆင့် တင်ပြထားပါတယ်။ ချီကာဂိုတက္ကသိုလ်ရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ တစ်ညကို ၅နာရီထက် အိပ်ချိန်နည်းတဲ့သူတွေဟာ တစ်ညကို ၇နာရီကနေ ၉နာရီအထိ အိပ်ချိန်ရှိသူတွေထက် အမျိုးသားဟော်မုန်းဖြစ်တဲ့ Testosteronပိုနည်းလေ့ရှိပြီး ၁၅နှစ်စာလောက်စောပြီး အိုမင်းဟန်ပေါက်လာပါတယ်။အဲ့တော့ အမျိုးသားထုရေ ညမနက်ခင်အိပ်ရာစောစောဝင်သင့်တယ်လို့များ မစဉ်းစားမိဘူးလားခင်ဗျာ???
ဖရဲသီးမှာ Viragraမှာပါဝင်တဲ့ ဒြပ်ပေါင်းတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံခြင်း ဆင်တူတဲ့ အန္တရာယ်မရှိတဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေပါဝင်နေပါတယ်။အဲ့ဒီဒြပ်ပေါင်းက ပန်းသေပန်းညှိုးရောဂါကို ဖြစ်စေနိုင်စွမ်းနည်းရုံသာမက မဖြစ်အောင်ပါကာကွယ်တားဆီးနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ ဖရဲသီးများများစားကျပါနော်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်မှ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တစ်ခုအရ အလွယ်စာအစားများတဲ့သူတွေဟာ အစားနည်းတဲ့သူတွေထက် မျိုးအောင်နိုင်စွမ်းပိုနည်းနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ရိုချက်စတာတက္ကသိုလ်မှ ၂၀၁ဝခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော တွေ့ရှိချက်တစ်ခုတွင် တစ်ပတ်ကို နာရီ၂ဝထက်ပိုပြီး တီဗွီကြည့်တဲ့သူတွေဟာ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမရှိတာကြောင့် တီဗွီမကြည့်တဲ့သူတွေထက် မျိုးအောင်နိုင်စွမ်း ၄၄ရာခိုင်နှုန်းနည်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
နေရောင်ကာခရင်မ်(Skin Lotion)တွေဟာ အရေပြားကင်ဆာကို ကာကွယ်စေပါတယ်။ဒါပေမယ့် မျိုးအောင်နိုင်စွမ်းကိုတော့လျော့ကျစေပါတယ်။နေရောင်ကာခရင်မ်လိမ်းပြီးအနေများတဲ့သူတွေဟာ မျိုးအောင်နိုင်စွမ်း ၃ဝရာခိုင်နှုန်းပိုနည်းပါတယ်လို့ အမျိုးသားကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ်(National Institute of Health)(N.I.H)က ထုတ်ပြန်ကြေငြာထားပါတယ်။ဖြေရှင်းဖို့နည်းလမ်းကတော့ နေပူထဲမထွက်ခင်နေရောင်ကာခရင်မ်လိမ်းပါ။နေပူထဲက ပြန်လာပြီး မကြာခင်မှာ ရေပြန်ဆေးပစ်ပါ။ပြီးတော့ ခရင်မ်ကို လျော့သုံးပါ။
သွားကျန်းမာရေးကို ဂရုမစိုက်ခြင်း(သွားမတိုက်ခြင်း)က ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကို ပိုများလာစေပါတယ်။သွားထဲက အဲ့ဒီပိုးတွေက လိင်တံရဲ့ သွေးကြောတွေထဲအထိ ရောက်သွားပြီး ဒုက္ခပေးပါလိမ့်မယ်။ခံတွင်းနံ့ဆိုးခြင်းကပဲ သွားတိုက်နည်းခြင်းရဲ့ အပြစ်မဟုတ်ပါဘူးလို့ ၂၀၁၂ခုနှစ်မှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တစ်ခုကပြောပါတယ်။
တက္ကဆပ်တက္ကသိုလ် ကျန်းမာရေးသိပ္ပံဌာနက သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ တစ်နေ့ကို ကော်ဖီ ၂ခွက် ၃ခွက်သောက်တဲ့သူတွေဟာ ပန်းသေပန်းညှိုးဖြစ်နိုင်စွမ်းအလွန်နည်းလွန်းပါတယ်။ကော်ဖီထဲမှာပါတဲ့ ကဖင်းဓာတ်ဟာ လိင်တံအတွင်းက သွေးလွှတ်ကြောတွေနဲ့ ကြွက်သားတွေကို ဖြေလျော့စေပြီး သွေးစီးဆင်းမှုကို လွယ်ကူစေပါတယ်။
Previous: EQ ေကာင္းသူေတြမွာေတြ႔ ရတဲ့ ႏွလံုုးရည္မ်ား
Next: အခ်စ္စစ္ဆိုတာ တည္ေဆာက္ယူရတာပါ